Cameroon - Gari-Gombo: Yaa doonaya Madaxa Duqa Magaalada? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » SIYAASADDA »Cameroon - Gari-Gombo: Yaa doonaya Madaxa Duqa Magaalada?
Dhamaadka doorashooyinka soo socda, qaar ka mid ah caan ka mid ah degmadaan ku yaala gobolka Bariga ayaa lagu tuhunsan yahay in ay beeri ku abuurayaan farcanka kala qaybinta iyo dabagalka xisbiyada in la buuxiyo. Saldhigga xagjirka ah ayaa cambaareeyay ficilada been abuurka ah ee ka dhanka ah Duqa Magaalada.
Natiijadu waxay ahayd 24 bishii Maarso ee la soo dhaafay intii lagu jiray dabaaldeggii 34ème ee sannad-guuradii Democratic Democratic People of Cameroon (CPDM). Inkastoo dhaqdhaqaaqa ee xisbiga talada haya ayaa soo ururshay si ay ugu dabaal la isqurxin iyo iid dhacdo, oo ku saabsan yaryahaye ka tirsan qaar ka mid ah qaybta CPDM ku Boumba-iyo-Ngoko woqooyi tuuray qaboowga ah ee qolka.
Dhexdhexaadinta khilaafka, muran ku saabsan deeqda ah ee 100 Cfa kun francs oo uu soo diray Robert Bayangan. Tani waxay u diri lahayd lacag dhaqaale yar oo ah dhaqdhaqaaqa Rdpc iyada oo loo marayo Filimmon Dinal iyo Bertin Mogba, hogaamiyayaasha mashruuca Guddiga Dhexe ee Rdpc muddada dabaaldegga.
"Lacagtan waa in loo diraa guddiga qabanqaabada oo uu hoggaamiyo Duqa Magaalada ee sida Armand Ndjodom udubdhexaadin lahaa si looga fogaado abuurista muran badan," waxay qabtaa RDPC. Taasina waxay u muuqataa, dhaqdhaqaaqayaal badan iyo
dhaqdhaqaaqayaasha qaybtan oo u maleynaya in tani ay si cad u dooneysay inay abuurto
khalkhalka iyo kala qaybsanaanta Rdpc, oo ay ku jirto xasilloonida hogaamiyaha siyaasadeed ee degaanka.
Tani waxay u muuqataa mid aad uwanaagsan sababtoo ah xaqiiqooyin aan la ilaawi Karin ayaa weli ku xusan xusuusta codbixiyeyaasha maxalliga ah. "Waxa uu doonayay inuu noqdo xubin iyo madaxweyne qaybteeda doorashadii ugu dambaysay, laakiin ma aysan shaqeyn. Sababta uu u ciyaaro xisbiyada dhibaatooyinka xisbigu ku yareeyo Duqa Magaalada ", wuxuu neefsanayaa hoosta madaxweynaha qaybta hoose ee degmadaan ee qaybta Boumba iyo Ngoko.
A si khalad ah ama ku habboonayn, Robert Bayangan waxaa lagu tiriyaa uu doonaya in ay wada gariiri qaybta CPDM boumba-et-ngoko Waqooyiga hogaaminayo duqa Simon Kallah soo bandhigay sida ay tartan siyaasadeed ee ka dambeeya waqtiga. In galaxyadani ay ka soo baxaan qulqulo aan horay loo arag, waxay u muuqataa in munaasabado wanaagsan oo siyaasadeed oo kale oo siyaasadeed ay noqdeen kuwo caadi u ah jadwalkooda.
A Gari-Gombo, waxaa lagu xamanayaa in cariishyada Yuusuf Roland Matta, Head of wafdiga joogtada ah wasaaradda ee golaha dhexe CPDM si xaqiiqda dhegta dhega la ', kuwaas oo Muran daciifiya laga yaabaa in xisbiga ee Paul Biya in doorashooyinka soo socda. "Halkan waa mudane a yaa awood u leh inuu soo afjaro daadsanaanta in uu leeyahay waxba, markii xisbiga ragga iyo dumarka si buuxda uga go'an in ay ku guuleysato dagaallada siyaasadeed ee soo socda, waxay u baahan tahay" Madaxweynaha ah xanaaqin of hoosaadka CPDM.
A xusuusin ah oo la mid ah digniinta ah hab dhaqameed-siyaasadeed halkaas oo dadka maxalliga ah ee ka cabanaya horumarka iyo saboolnimada kama soo horjeedo soo jeedinta rabitaanka ee xisbiyada cusub ee mucaaradka iyo kuwa iibiya. khayaal.
Gobolka Bariga guud ahaan, doorashadii 07 ee 2018 ee ugu dambeysay ee XNUMX ayaa u oggolaatay xisbiga talada haya in uu barto dhowr cashar. Dhab ahaantii, waxaa la caddeeyay in inta badan, fiiri inta badan dadka raacsan iyo kuwa dhaqdhaqaaqa leh ee xisbiyada cusub ee mucaaradka ah ay ka soo jeedaan safka xisbigan.
"Ma dooneyno inaan sii noolaano marxaladan. In Gari-Gombo, hadafkayagu waa inaan ku guuleysano
doorashooyinka baarlamaanka, dawladaha hoose iyo kuwa goboleed ee lagu dhawaaqay bilaha soo socda, iyada oo aan jirin wax xayiraad ah. Taas oo ah kuwa raba inay naga leexiyaan ama niyadjabiyaan xisbigan ayaa la arki doonaa
meelo kale, "ayaa soo jeediyay dhaqdhaqaaqe sii kordhaya by geesiyaalahan.
Marka la eego mawduuca dabbaaldegga 34ème ee sannad-guuradii Rdpc ee lagu taliyey
xoojiyo abaabulka ka dambeeya Madaxweyne Paul Biya for xoojinta nabadda dhulka qaranka oo dhan, iyo sii-habboonaanta oo ka mid ah barnaamijka fursado weyn, farriin ugu sii dhiibay by Madaxweynaha Qaybta CPDM of Boumba iyo Ngoko Waqooyi waxay ahayd in la abaabulo oo ay kor u qaaddo ficillada xisbiyada si ay u diidaan codadka doorashooyinka soo socda ee degaankan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/09/cameroun-gari-gombo-qui-veut-la-tete-du-maire/
"Mamnuucidda dhacdooyinka dadweynaha waa mid amar la'aan ah oo aan la soo saarin war-saxaafadeed"